6 Dariiqo Oo Loo Soosaarayo Nuxurka Hore | Martech Zone
6 Siyaabood oo Loo Soo Noolayn Karo Hore
Khamiista, Oktoobar 23, 2014 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Mid ka mid ah talooyinka aan inta badan shirkadaha siiyo ayaa ah sida dib loogu soo nooleeyo waxyaabaha duugga ah si loo kaxeeyo taraafikada cusub. Haddii aad wax ku qoraysay baloog muddo dheer, waxaad haysataa waxyaabo badan oo wanaagsan - inbadan oo ka mid ahna weli waxay ku habboon yihiin akhristayaasha. Ma jirto sabab aanad dib ugu soo noolaan karin mawduucan si aad ugu dhisto taraafikada bartaada oo aad ganacsi ugu kaxaysid shirkaddaada.
6 Siyaabood oo Loo Soo Nooleeyo Mawduuca
Iyada oo loo marayo boostadaada soo socota: Weligaa ma tixraacaysaa qoraallo duug ah oo ku jira qoraalladaadii ugu dambeeyay? Maxaa diidaya Haddii aad qortay waxyaabo aad u wanaagsan oo quseeya qoraalka hadda jira, waa inaad ku tuurtaa xiriiriye halkaas. Intaa waxaa sii dheer, waxaad xitaa jeclaan kartaa inaad ku darto qoraallo laxiriira qoraallo (qoraaladayda ugu xiisaha badan ee WordPress la xidhiidha halkan ayaa laga helaa). Bixinta qoraallada laxiriira waxay dib uga soo nooleyn kartaa farriimaha labadaba mashiinka raadinta (maadaama aad xiriir kahesho boggaaga guriga) iyo sidoo kale kordhinta boggagaaga booqashadii goobta.
Iyada oo loo marayo Matoorada Raadinta: Iibso rukumo hal maalin ah SEOpivot. Ku orod warbixinta ka soo horjeedka bartaada internetka waxaana lagu siin doonaa liistada qoraallada leh ereyo muhiim ah oo ku habboon oo boostada loo helo. Kordhi cinwaanka boostada, sharraxaadda meta iyo ereyada ugu horreeya ee boostada si loogu daro ereyada muhiimka ah dibna loo daabaco. Ilaa iyo inta aad ku rakibtay aaladda Khariidadda bogga, tani waxay ku wargelin doontaa mashiinka raadinta ee isbeddelka oo boostadaada ayaa dib loo tixraaci doonaa, oo ay u badan tahay darajo aad uga wanaagsan.
Iyada oo Twitter: Waxaa jira waxyaabo badan oo tweetin ah oo socda. Waxaa laga yaabaa inaad waxoogaa korortay wixii ku xigay tan iyo markii ugu dambeysay ee aad ku dhejiso qoraal qoraal ah barta Twitter si aad ula wadaagto shabakaddaada. Mar labaad ku dhawaaq (laakiin sii ogeysii kuwa raacsan inay tahay dib-u-celin), adoo sheegaya… “Tani waxay ahayd qoraalkeygii ugu caansanaa ee bishii la soo dhaafay ku saabsan [qor mawduuca]. Haddii akhyaartu aysan aqrin, waa laga yaabaa hadda!
Iyada oo StumbleUpon: Waa inaadan kaliya ku dhiirrigelin waxyaabahaaga gaarka ah StumbleUpon… waa inaad kaqeybqaadataa bulshada oo aad ku turunturootaa boggaga kale sidoo kale (kama qoomameyn doontid… Waxaan halkaas ka helay tan oo ah ilo qabow). Si kastaba ha noqotee, waqti ka waqti, kor u qaadista waxyaabaha hore ee aan ahayn turunturooday ka hor kaxayn kara qaar ka mid ah taraafikada weyn.
Iyada oo Facebook: Bogagga Facebook iyo astaamaha shakhsiyadeed waa meel fiican oo lagu soo bandhigi karo waxyaabaha qadiimiga ah ee wali shaqeynaya. Durdurka Facebook ayaa ah kan 'durdurka' oo markii aad inyar sugto, dib ayaad dib ugu soo bandhigi kartaa waxyaabo aad u fiican oo ku soo noqnoqda durdurka oo waxaad ku abuuri kartaa fiiro badan mar labaad.
Iyada oo Google+: Ha xisaabin tirada yar ee laakiin u heellan wadahadallada ka dhacaya Google+. Sababtoo ah dad yar ayaa si firfircoon ugu hawlan runtiina waxay ku siinaysaa fursado badan oo lagaa heli karo lagana wadaagi karo bulshadaas dhexdeeda!
Haddii aad haysatid baloog leh waxyaabo badan oo wanaagsan, soo noolaynta waxyaabaha ku jira waxay kuu noqonaysaa istiraatiijiyad socda. Ku riixista waxyaabaha qadiimiga ah ee khuseeya dib ugu noqoshada tooska waxay u kaxeyn kartaa taraafiko badan ganacsigaaga. Noqo mid ku xeel dheer waxyaabaha aad dhiirrigeliso hana ku buuxin taageerayaashaada hadda jira, kuwa raacsan iyo kuwa kula macaamiisha wax badan oo soo noqnoq ah… laakiin ha ka waaban inaad dhiirrigeliso qoraal caan ah si aad dib ugu soo nooleyso. Waad la yaabi doontaa sida qiimaha leh ee jirku u noqon karo!
Tags: Facebookgoogle +content jirsoo nooleeya waxyaabahasoo nooleeya waxyaabahamatoorada searchTwitter
Dhaqanka ugu Wanaagsan ee Degitaanka: Sida Loogu Tayeysto Beddelaadda
Oktoobar 27, 2014 at 9:32 PM
Douglas, weligay kama fikirin StumbleUpon. Ka fikir inay tani tahay waxtar weyn oo baaritaan dheeraad ah lagu samayn doono. Waxaan sidoo kale jecelahay menton mentpe-ka ee ku xirnaanshaha maqaalladii hore, sida tallaabada fudud ee badanaa la iska indhatiro.